Inona no dikan'ny hoe rehefa tsy tian'ny vadinao nokasihinao izy?  - Fitiavana
iphone 6 plus manohy mamerina hatrany
iphone ela loatra vao andoavana vola
ny fomba famadihana wifi amin'ny iphone 6
amboary ny efijery iphone 6 vaky
iphone habe lehibe loatra
Inona no dikan'ny hoe rehefa tsy tian'ny vadinao hokasihinao izy?
Inona no dikan'ny hoe rehefa tsy tian'ny vadinao hokasihinao izy ?.
Ny fitenin'ny vatana dia tena maneho hevitra sy mifampiresaka ao anatin'ny fiaramanidina fitiavana ny fifandraisana. Ny halaviran'ny vatana dia mety misy ifandraisany amin'ny halaviran'ny fihetsem-po. Raha sendra toe-javatra toy izany ianao dia azonao atao ny manontany tena hoe: Maninona ny vadiko no tsy mikasika ahy? Afaka manampy anao izahay hahita ny valin'izany sy ireo fanontaniana mifandraika amin'izany toa ny tsy fisian'ny faniriana akaiky ao amin'ny vadinao na ny fandavana izay mampiseho anao amin'ny tsiambaratelo.
Antony 8 mahatonga ny vadinao tsy hikasika anao
Adin-tsaina. Ny hafainganam-pandehan'ny fiainana maoderina, voamariky ny fanoloran-tena tsy tapaka sy ny hamehana ataon'ny haingam-pandeha izay manamarika ny hafainganan'ny asa sy ny adidy hafa, dia mety hisy fiatraikany amin'ny toe-pon'ilay voa. Afaka mihetsika ny fihenjanana tsy firaikana manokana. Ny fihenjanana dia mitaona ny filana satria rehefa mandalo toe-javatra toy izany ny olona iray, dia manana fomba fijery redistista ny zava-misy izy. Ny eritreriny dia mifantoka indrindra amin'ny antony mahatonga ny fiahiahy manohina azy na ilay olana tiany hovahana. Afantohy amin'io tanjona io ny herinao rehetra.
Ny lanjan'ny mahazatra amin'ny fifandraisana. Fahavoazana izany. Ny monotony dia mety miteraka fijaliana marobe amin'ny sehatra ara-tsaina; ny fomba fanao dia mety hahafaty ny filan'ny mpivady raha tsy mandray andraikitra ny fampidirana ny zava-tsy ampoizina amin'ny fitiavana.
Kely hambom-po. Ohatra, ny olona iray izay manana sarotra ara-batana izay mametraka ny foto-keviny momba ny tenany dia manangana ny tenany ho tsy mahasarika ny hafa. Izany hoe, mamoaka ny tsy fandriam-pahalemany amin'ny alàlan'ny fitenin'ny vatana.
Fivadihana. Raha tsy mikasika anao ny vadinao ary tsy mitady anao hanao firaisana, dia mety haneho ny toe-javatra misy ireo toetra ireo koa. Na izany aza, mba ho antony nahatonga ny raharaha dia tsy maintsy ampiana singa hafa ity fanazavana ity. Ohatra, ny fanovana ny fahazarana sy ny tsy fahatongavana maharitra tsy misy fanamarinana mitombina sy ekena. Mety hitranga ilay olona tsy namorona ilay tsy fivadihana, fa tia olona fahatelo ary tsy liana tamin'ny sakaizan'izy ireo.
Krizy mpivady sy olan'ny fifandraisana. Ny krizy dia miteraka fijaliana satria mahatsapa ny mpivady ny tsy fahatokisana ny tsy fahalalana ny fivoaran'io tantaram-pitiavana io. Ny vatana sy ny saina dia mifanerasera matetika, ary koa amin'ny fitiavana. Amin'izany fomba izany, ny vatana dia afaka manaramaso ny sakanana, ny fahatsapana mifanohitra ary ny knot ara-pihetseham-po amin'ny toe-javatra iray izay miteraka lanja ara-tsaina. Toy ny mpivady mampita ny fitiavany amin'ny alàlan'ny herin'ny fikolokoloana, ny mifanohitra amin'izany aza, ireo izay manana halavirana ara-pihetseham-po noho ny tsy fitovian-kevitra dia afaka mahatsapa fa eo anelanelany dia misy sakana miteraka elanelana. Ary io tsy fisian'ny fifandraisana ara-batana io dia taratry ny halavirana.
Ny voka-dratsin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Ny fahasalamana koa dia misy fiantraikany amin'ny filan'ny nofo ary, amin'ity tranga ity, ny tsy fahampian'ny faniriana dia mihoatra ny sitra-pony. Ohatra, mety hitranga izany raha misy olona ketraka amin'ny fahaketrahana mafy. Amin'ity tranga ity, ny manam-pahaizana manokana dia afaka mampahafantatra amin'ny marary ny vokadratsin'ny toe-pahasalamany.
Tazomy ny tsiambaratelo. Tsiambaratelo te hilaza aminao fa tsy mahay manao azy. Izany dia miteraka fihenjanana ara-tsaina sy fifanoherana tsy tapaka. Ohatra, azonao atao ny mihevitra fa ny fifandraisana misy eo amin'izy roa dia efa tapitra, saingy tsy sahinao atao ny manatanteraka ny dingana amin'ny fanapahan-kevitra.
Tahotra ny fiainana manokana. Ny vadinao dia mety handà anao tsy ho akaiky anao noho ny zavatra ratsy niainanao taloha izay niteraka fahasosorana.
Ahoana ny fomba hahitana vahaolana amin'ny tsy fisian'ny faniriana
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiezahanao hamantatra ny antony mahatonga ny olon-tianao tsy hikasika anao na hitady anao akaiky, satria, arakaraka ny antony mahatonga an'io zava-misy io, ny toe-javatra dia hafa na iray hafa. Ohatra, tsy mitovy ny toe-javatra rehefa entanin'ny adin-tsaina na fitaintainanana izy io raha toa ka vokatry ny tsy fivadihana izany toe-javatra izany satria ny antony dia miteraka vokany izay misy fiatraikany amin'ny mpivady amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Andramo miresaka amin'ny vadinao , amin'ny feon'ny fahatokisana. Raha mieritreritra ianareo fa samy mila fanampiana hanarenana ny toe-draharaha, dia afaka manolo-kevitra hitady torohevitra matihanina ianareo. Na izany aza, mba hahasoa ity dingana ity, ianareo roa dia tokony hanaiky handray an'io dingana io satria tsy misy afaka manampy an'izay tsy te handray io fanampiana io.
Na izany aza, tsara ihany koa ny manandrana amporisiho ny fitsidihanao lalina mikasika ny toe-javatra. Tsy azonao fantarina ny valiny omen'ny vadinao toky azy. Na izany aza, azonao atao ny misaintsaina ny toe-javatra tamin'ny fomba niainanao azy. Ohatra, oviana no niseho ny fiovana teo aminao? Ary inona araka ny hevitrao no nitranga tamin'io fotoana io mba hiaina io fiovana io? Miezaha mandehandeha ara-tsaina amin'io fotoana io hanombanana ireo anton-javatra samihafa mety hisy fiatraikany amin'ny fifandraisana.
Ity lahatsoratra ity dia fampahalalana fotsiny ; ao Redargentina, tsy manan-kery hanao diagnostika izahay na hanome torolàlana momba ny fitsaboana. Manasa anao izahay handeha any amin'ny psikology mba hiresaka momba ny tranga manokana.
MAMELY NY AFO KILO NY FITSIPIKO ANAO
Inona no dikan'ny hoe rehefa mijery anao ny tovovavy iray nefa tsy mitsiky?
Soso-kevitra 10 hijanonana amin'ny namanao mandrakizay
Anaran-tarehy mahafatifaty 50 tena miantso ny sipanao - Top…
Ahoana ny fomba hiarahabana amin'ny zazavavy? - Izay tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy
Inona no dikan'ny hoe rehefa miantso anao ny zazavavy iray?